Salaamanews » Fannaanka Axmed Heybe oo lagu aasayo Muqdisho
Home » Suugaan, Warar Fannaanka Axmed Heybe oo lagu aasayo Muqdisho Print - Daabace: SalaamaNews - Dec 6th, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Marxuum Majaajiliiste Ziiyo Toom oo lagu aasay MuqdishoAbwaan Gaariye oo xalay geeriyoodayAbwaan Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye oo maanta Soomaaliland lagu aasayKooxihii dilay Abwaan Warsame Shire oo la qabtay Daawo: Hadii aad Shiinaha joogtid way adagtahay in carruurtaada aad iskuulka u dirto (dhacdo la yaab leh)
(Salaamanews)Allaha unaxariistee Fanaanka caanka ah ee Axmed Haybe Caraale oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu wadaa in lagu aaso magaalada Muqdisho.
Fanaanka ayaa xalay wuxuu ku geeriyooday isbitaalka Banaadir ee Magaalada Muqdisho kadib markii ay barartay caloosha sidaasna uu ugeeriyooday.
Nimco Axmed Heybe oo iyana ah majaajiliiste caan ah uu dhalay allah ha u naxariistee fanaanka ayaa SN u sheegtay in geerida abwaanka ay kadis aheyd, waxaana ay xustay in gillinkii dambe ee shalay uu soo wanaagsanaanayay.
Maareeyaha tiyaatarka qaranka Abwaan Cabdi Dhuux oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay maanta in marxuumka lagu aasi doono magaalada Muqdisho.
Fanaanka Allaha unaxariistee Axmed Haybe Caraale ayaa wuxuu kamid ahaa fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku sugan Magaalada Muqdisho, wuxuuna fanaankaan uu qaaday heeso badan oo ay ku jiraan kuwo wadani ah.
Wuxuu ifka kaga tagay todobo caruur ah oo isugu jira hablo iyo wiilal oo dhamaantood kuwada sugan Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
INAA LILLAAH WA INNAA ILEYHI RAAJICUUN
Tags: suugaan, warar « Qoraalkii HoreDaawo Muuqaal ku saabsan kulankii uu madaxweynaha Soomaaliya la yeeshay dhiggiisa Turkiga iyo waliba heshiiskii ay labada dal kala saxiixdeen	Qoraalka Xiga »Kenya oo Al Shabaab ku eedeysay qarax ka dhacay Nairobi	Halkan Hoose ku Jawaab